Final Cut Pro X waa barnaamij xoogga iyo xirfadda. Laakiin dhab ahaantii waxa ay ku siinaysaa baalal u yihiin boqolaal iyo boqolaal ka mid ah 3-da xisbi-fur-tago in aad si deg deg ah ku dari kartaa barnaamijka.
Liiska dhammaan dhibaatooyinka soo fursadaha weligood qaadan lahaa; kaliya sameeyo raadinta Google a for "FCP X plugins" oo aad arki doonaa waxa aan ula jeedo. Si kastaba ha ahaatee, halkan waa toban shirkadood oo kuwa dadka saamaynta fiican, qalab, kala guurka iyo weirdness muuqaal guud waa inaad tixgelisaa inaad ku daray in habka Goo Final u gaar ah. Waxay qiimaha, laakiin mid kasta oo abuuri saamaynta kaliya ma waxaad ka heli kartaa qaab kale.
Taxane ah oo ka siib-tago oo lacag la'aan ah in la abuuro saamaynta, weirdness guud ama xallinta masalooyinka. Alex Golner ayaa lagu soo koraya plugins u Final Goo tan ku saabsan version 1.0.
Baro wax badan oo ku saabsan Alex 4D >>
# 2. Arctic isakaga
Tani waa qalab kama dambaysta ah ee maaraynta maktabadaha, warbaahinta, oo la moodo files ee Final Cut Pro X. eeg waxa warbaahinta waxa lagu kaydiyaa halkaas oo si deg deg ah u tirtirto aad files baahan mar dambe. Tani waxay ku saabsan tahay utility sida lagama maarmaan sidii aad u heli doonaa Goo Final ah.
Baro wax badan oo ku saabsan Arctic isakaga >>
# 3. Design Tools afka ciida
Price: $ 59 - $ 349, ku xiran baakada
Maktabadda A ee saamaynta muuqaal ah xubno si aad u jiidi-iyo-hoos u si toos ah aad FCP X Timeline si ay u abuuraan kala duwan ee saamaynta. Kuwaas waxaa ka mid ah: dab, qiiq, boodhka, baraf, mattes, kala guurka iyo daraasiin ka badan. Ugu qaraarada ilaa 4K.
Baro wax badan oo ku saabsan Design Tools afka ciida ugu >>
# VFX 4. Motion
Price: $ 39 - $ 349, ku xiran baakada
Soo diyaariyeen A baaxad Codsiga iyo Final Cut Pro arrimo X, saamaynta muuqaal ah, koobab iyo logos. Kala duwan oo si wayn, design cajiib ah, farabadan oo ah doorashooyin.
Baro wax badan oo ku saabsan Motion VFX >>
Price: Xirmada heleynin Free, plugins dhaxayn si xor ah u dhowr boqol oo doolar
FxFactory bixisaa engine saamayn ah oo shirkadaha kale ee ay isticmaalaan si ay u abuuraan saamaynta gaar ah laga bilaabo horyaal oo fudud oo kala guurka ah kuula dhaqmo muuqaal ah in ay yihiin wax aan macquul aheyn in lagu qeexo in erayada. Marka aad leedahay FX Factory lagu rakibay, waxaad dooran kartaa ka boqolaal plugins in uu ordo ku yaal. Plus, waxa uu siiyaa interface ah ka dhigaya riteen maamul ee fur-tago fudud.
Baro wax badan oo ku saabsan FxFactory >>
Price: $129.95 u xidhmo saamaynta, $ 299 u Titler Pro 3
NewBlueFX bilaabay on Windows, iyo laba sano ka hor, waxay u guureen Mac ee taageeraya labada Adobe Ciyaar iyo Apple Final Cut Pro. Waxay xirmooyin kala guurka iyo saamaynta kaas oo lagu cusboonaysiiyo footage, iyo sidoo kale dar horyaal, kala guurka iyo saamaynta muuqaal ah. Laakiin xiddiga dhabta ah ee ay show waa xirmo ah dhigista la yaab leh ugu baaqay Titler Pro 3.
Baro wax badan oo ku saabsan NewBlueFX >>
Price: $ 39 - $ 99, taasoo ku xidhan baakada
Maalintii ugu danbeysay Cut Pro X markii ugu horaysay la sii daayay, Crumplepop sharad beer weyn oo bilaabi horumarinta saamaynta si gaar ah loogu Goo Final. Furitaankii ayaa fasax lacag leh noocyo kala duwan oo qani ku ah qalabka midabka, GoPro Fisheye jiheeyayaasha, screen kala iyo saamaynta kale. Waxaa jira farabadan oo ah goodies uu ka soo xusho.
Baro wax badan oo ku saabsan Crumplepop >>
Price: Qiimaha dhaxayn si xor ah u dhowr boqol oo doolar, taasoo ku xidhan xirmo
Red Giant Software waa hay'ad kale qadariyo in industry saamaynta. Industry-keentay keyers ay Trapcode, Colorista, iyo Primatte heerka warshadaha. Dhawaan, kolkaasay iyagu abuurmaan "Caalamka", kaas oo kuu ogolaanaya inaad si ay u helaan in ay xoolo ka mid ah saamaynta, lacag aad u macquul ah bil kasta. Price: Qiimaha dhaxayn si xor ah u dhowr boqol oo doolar, taasoo ku xidhan xirmo.
Baro wax badan oo ku saabsan Red Giant Software >>
# 9. Assistance Intelligent
Price: Laga billaabo $ 9.99, ku xidhan xirmo
Wada hadal kasta oo ku saabsan plugins u Final Goo ka mid ah kooxda ugu Assistance Intelligent. Waxay siiyaan qalab adeeg oo caawiya la gashid footage, guud ahaan wararka wax soo saarka, iyo diinta mashaariic dhexeeya qoraaladoodii. Ma aha qof kasta wuxuu u baahan yahay qalabka, laakiin marka aad samayn, wax u dhaama la jirto.
Badan oo ku saabsan Kaalmada Intelligent Baro >>
Price: $ 695 maxkamadda free
BorisFX waa Swiss-Ciidamada-Mindi ah saamaynta muuqaal ah. Boqolaal saamaynta, qalab, kala guurka, koob oo dhan ka mid xirmo: Boris taxanaha v9 Buuxi. Saamaynta xirmadan u baahan tahay in lagu arko in ay la rumeysan yahay. Saamaynta cajiib ah, qalab in la sameeyo xubno aan la rabin in jir baaba'aan, keyers, waji, iyo in ka badan isha-nacnac badan damaashaad uu.
Badan oo ku saabsan FX Boris Baro >>
Waxaa jira shirkado kale oo aad u badan in la soo sheegnay ayaa laga yaabaa, waxay u muuqataa inuu ceeb ah si ay u joojiyaan at toban. Laakiin oo dhan ka mid ah shirkadaha waxay ka dhigi waxyaabaha aad u fiican oo ku siin kara mashaariic fiiri gaar ah. Sidoo kale, wax badan oo ka siiyaan tijaabooyin lacag la'aan ah, si aad u tijaabiyaan karaan iyaga la adiga kuu gaar ah oo loo arko kuwa aad ku noolan karin bilaa.
Waxaan mar walba ku riyaaqay fur-tago. Sababtoo ah waxa ay sameeyaan waa qaadan qalabka salaysan gudaha Final Goo iyo kordhiyo siyaabo in kaliya boggle caasinimada. Iyo captivating male daawadayaasha waa goolka ah editor kasta.
> Resource > FCP > 10 plugins Cool u Final Cut Pro X